मनोज गजुरेल, भाद्र २८, २०७५
मेरा बा, म र मेरो छोराको बुझाइ फरक–फरक छ जीवनका बारेमा । मेरा हजुरबा भन्नुहुन्थ्यो, जीवन दुई दिनको रामछायाँ हो, तर उहाँ १०२ वर्षसम्म बाँच्नुभयो ! म भन्छु, यो त यौटा खेलौना हो तर स्वयम् मलाई कुनै बच्चाले खेलाउन सक्दैन । मेरो छोरो भन्छ, जीवन दामी छ तर यसको किनबेच भएको थाहा छैन । न त सेयर कारोबारझैं जीवनको उद्योग मार्केटमा छरिएको छ । जीवन त नितान्त व्यक्तिगत विषय हो । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , भाद्र २८, २०७५
सामसुङले जर्मनीको बर्लिनमा सम्पन्न आईएफए–२०१८ कन्जुमर इलेक्ट्रोनिक शोमा संसारकै पहिलो एटके क्यूएलईडी टिभी प्रस्तुत गरेको छ । उक्त टिभी ६५, ७५, ८२ तथा ८५ इन्च स्क्रिनमा उपलब्ध हुनेछ जसको रिजोलुसन ७६८० तथा पिक्सेल ४३२० हुनेछ । पुरा पढ्नुहोस्
हङ्कङमा हुर्किरहेका तेश्रो पुस्ताहरुको प्रतिभालाई उजागर गर्ने हेतुले स्थापना भएको स्वप्न ट्यालेन्ट शो को दोश्रो श्रृखला सम्पन्न भएको छ । पुरा पढ्नुहोस्
दश जोड दुई अध्ययनरत छात्र छात्राहरुमा केन्द्रित सौन्दर्य प्रतियोगिताका रुपमा संचालित ‘मिष्टर एण्ड मिस प्लस टू स्टार २०१८’मा श्याम प्रधान र कोपिला अधिकारी शीर्ष उपाधि जित्न सफल भएका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
मिस नेपाल २०१२ सृष्टि श्रेष्ठले यतिबेला आफ्नो परिचय बदलिसकेकी छिन् । उनलाई अचेल मिस नेपाल कम, नेपाली चलचित्रकी अभिनेत्रीका रूपमा बढी चिनिन्छ । पहिलो चलचित्र गाजलुमा अभिनय गर्ने क्रममा दर्जनौं पटक सट बिग्रिएर निर्देशकको गाली खाँदा समेत हरेस नखाएकी सृष्टि पछिल्लो चलचित्र ‘बाँध मायाले’ सम्म आइपुग्दा परिपक्व भैसकेकी छिन् । पुरा पढ्नुहोस्
डा. राजेन्द्र भद्रा, भाद्र २८, २०७५
यौनसम्बन्धी नकारात्मक सोच, यौन साथीप्रति पर्याप्त यौन आकर्षण नहुनु वा समाजमा बर्जित किसिमको यौनसम्पर्कमा संलग्न भएका बेला समातिएको स्थिति, यौनशोषण भएको स्थिति अनि चिन्ताजस्ता कतिपय मानसिक स्थितिले पनि यस्तो समस्या सिर्जना गर्न सक्छ । अत्यधिक रक्सीको सेवनका कारण पनि वीर्य स्खलनमा समस्या सिर्जना हुन सक्छ । पुरा पढ्नुहोस्
मोडल हन्ट नेपाल–२०१८
भोली शुक्रबार मोडल हन्ट नेपाल–२०१८ को ग्रान्ड फिनाले हुँदैछ । मोडल हन्ट नेपाल को यो चौथो सिजन हो । ३३ पुरुष तथा २५ महिला सहभागी यो शोमा फेसन तथा चलचित्र उद्योगका सेलिब्रिटीहरू पनि सहभागी हुने बताइएको छ । पुरा पढ्नुहोस्
नेपाली व्याकरणलाई सहज रूपमा सिकाउने उक्त गीतमा शंखमुल, काठमाडौंस्थित अवेरनेस इन्टरनेसनल एकेडेमी (एआईए) का विद्यार्थीहरूको स्वर सुन्न सकिन्छ । विद्यालयकै नेपाली शिक्षक बिमल घिमिरेका शब्द तथा संगीत निर्देशनको उक्त गीतमा ह्रस्व तथा दीर्घ कसरी छुट्याउने, कस्तो शब्द ह्रस्व तथा दीर्घ हुन्छन् भन्ने कुरा सिकाइएको छ । पुरा पढ्नुहोस्